Izindatshana zikaDavid McIninch ku Martech Zone |
Imibhalo nge UDavid McIninch
UDavid uziphendulela ngazo zonke izici zomjikelezo wemali engenayo ka I-Acquisio; Ukumaketha, ukuthengisa, ukuthuthukiswa kwebhizinisi, ukuphathwa kwe-akhawunti nempumelelo yamakhasimende. I-Acquisio ingumhlinzeki ohola phambili womhlaba wonke wezixazululo ezinhle zokumaketha ezidijithali ezenza ukuthi ama-ejensi nabakhangisi bakwazi ukuletha ukusebenza komkhankaso okukhulu kakhulu.
Ukuthi Umshini Wokufunda Nemishini Kuzolikhulisa Kanjani Ibhizinisi Lakho
NgoLwesibili, ngoJulayi 5, i-2016 UDavid McIninch
Ngesikhathi soguquko lwezimboni abantu basebenza njengezingxenye zomshini, bemi emigqeni yomhlangano, bezama ukuzenza basebenze ngendlela efanelekile ngangokunokwenzeka. Njengoba singena kulokho manje okubizwa nge- "4th Industrial Revolution" sesamukele ukuthi imishini ingcono kakhulu ekubeni yimishini kunabantu. Emhlabeni ophithizelayo wokukhangisa kosesho, lapho abaphathi bomkhankaso belinganisela isikhathi sabo phakathi kwemikhankaso yokwakha ngobuhlakani, futhi bayiphathe futhi bayivuselele ngomshini